Ahoana ny fametrahana iOS 13 beta amin'ny iPhone sy iPad amin'ny Windows sy Mac | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fametrahana iOS 13 beta amin'ny iPhone sy iPad amin'ny Windows sy Mac
Ignatius Room | | Finday, Tutorials
Ny alatsinainy lasa teo, ny zazalahy Cupertino dia nanolotra am-pomba ofisialy maro an'isa zava-baovao avy amin'ny tanan'ireo kinova manaraka avyiOS 13, rafitra fiasa iPhone sy iPad, toy ny watchOS 6 (Apple Watch), tvOS 13 (Apple TV) ary macOS Catalina (ho an'ny Mac). Toy ny mahazatra amin'ny beta voalohany, voafetra ho an'ny mpamorona ihany ireo.
Araka ny fomban-drazana dia navelan'i Apple hametraka kinova vaovao ny mpamorona amin'ny alàlan'ny fampidinana mari-pankasitrahana avy amin'ny kaonty developer azy ireo, na izany aza, tamin'ity taona ity dia niova ny zavatra ary tsy tsotra toy ny teo aloha ny fizotrany. Raha te hahalala ianao ny fomba fametrahana iOS 13 amin'ny iPhone tsy misy mari-pahaizana momba ny developer, avy amin'ny Windows sy MacDia asehonay anao ny dingana rehetra tokony harahina.
1 Voalohany indrindra
2 Sintomy ny iOS 13 beta ho an'ny iPhone sy iPad
3 Mametraka iOS 13 beta avy amin'ny Mac
4 Apetraho amin'ny Windows ny iOS 13 beta
5 Tsara ve ny mametraka ny beta an'ny iOS 13?
Ny zavatra voalohany sy lehibe indrindra dia ny fanaovana backup amin'ny fitaovantsika. Ny fizotry ny fametrahana, tsy ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa, ary indrindra ny kinova beta, dia mety hanimba ny atiny efa notehirizintsika tao amin'ny solosaintsika, noho izany tsy liana amin'ny fahaverezan'ny atiny rehetra tahirizinay izahay.
Raha te hanao backup dia mila mampifandray ny fitaovantsika amin'ny solosaina sy amin'ny alàlan'ny iTunes fotsiny isika manaova backup voafafa ao amin'ny solosainay. Ny backup amin'ny alàlan'ny iCloud dia tsy mendrika antsika, satria tsy mandika ny atiny rehetra amin'ny fitaovantsika amin'ny rahona izy, ny fanaingoana natsangantsika ihany.
Sintomy ny iOS 13 beta ho an'ny iPhone sy iPad
Voalohany, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ny beta an'ny iOS 13 izay mifanaraka amin'ny fitaovantsika. Ity beta ity dia azo jerena ao amin'ny vavahadim-pampandrosoana, vavahady izay mazava ho azy fa tsy manana fidirana raha tsy. Soa ihany fa afaka amin'ny Internet isika mahita tranokala samihafa izay manolotra anay IPSW Amin'ny maodely tsirairay.
Ny tranokala izay manome toky anay indrindra raha ny fampidinana ny IPSW avy amin'ny fitaovantsika dia ireo an'ny lehilahy avy amin'ny Evad3rs, izay taona vitsivitsy lasa izay dia izy ireo no niandraikitra ny fampivelarana sy ny fikojakojana ny jailbreak, fony izy io no be mpampiasa kokoa noho ny ankehitriny.
Sintomy ny iOS 13 ho an'ny iPhone
Sintomy ny iOS 13 / iPadOS ho an'ny iPad
Manaraka izany dia tsy maintsy misafidy izay maodely iPhone na iPad ananantsika ary izay tiana hapetraka isika. Rehefa manindry azy io dia hiseho ny varavarankely miaraka amin'ny anaran'ny kinova izay ampidinintsika. Mila tsindrio fotsiny isika misintoma izao, hamafiso fa tsy robot izahay ary tsindrio hanohy.
Miankina amin'ny habetsaky ny mpizara, ny fizotrany dia afaka maharitra minitra maromaro ka hatramin'ny ora maromaro, ka mila manam-paharetana ianao amin'ny fisintomana azy. Raha tsy izany no izy, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny miandry hatramin'ny faran'ny volana Jolay mba hanokafan'ny Apple ny programa beta ho an'ny daholobe ho an'ny iOS 13 sy ny sisa amin'ireo rafitra fiasa izay ho tonga amin'ny kinova farany amin'ny volana septambra.
Raha hitantsika fa maharitra ny fampidinana dia afaka misafidy ny misintona ny IPSW amin'ny fitaovantsika isika Beta profil, na eo aza ny zava-misy araka ny efa nanamarihako tetsy ambony dia tsy mila taratasy fanamarinana hahafahana manatanteraka ny fametrahana.
Mametraka iOS 13 beta avy amin'ny Mac
Afaka mametraka, raha manaraka ny torolalan'i Apple isika, iOS 13 na kinova hafa amin'ny watchOS 6 na tvOS 13 amin'ny fitaovantsika dia ilaina raha toa ka hampiasa ny fampiharana Xcode, fampiharana ampiasain'ny mpamorona hamoronana rindranasa, ka mila kaonty mpamorona izahay.
Tsy mora ny fizotra hanaovana azy. Soa ihany, misy fomba hafa ahafahantsika mametraka Raha tsy misy an'ity fampiharana ity amin'ny dingana tsotra izay tsy dia mila fahalalana loatra, araho fotsiny ireo dingana izay hazavainay.
Raha vantany vao nisintona ny IPSW mifandraika amin'ny terminal izahay dia tsy maintsy ampidino ny fampiharana MobileDevice.pkg amin'ny alàlan'ity rohy ity.
Vantany vao alaina dia miroso amin'ny fametrahana azy amin'ny solosaina sy manokatra iTunes izahay ary mifandray ny fitaovantsika ho an'ny ekipa.
Manaraka, tsindrio ny kisary maneho ny fitaovantsika.
Raha mila manatanteraka fametrahana madio, izay atolotra anao foana na dia beta aza izany dia tsy maintsy manindry sy mitazona ny bokotra Option amin'ny kitendry isika rehefa misafidy «Hamarino ny fanavaozana«. Avy eo, mifidy ny fisie iOS 13 izay nosintominay izahay ary miandry ny fametrahana azy io.
Raha ny mifanohitra amin'izay no izy tsy te hanao installer aotra izahay ary amin'izay dia afaka miresaka momba ny rindranasa rehetra napetrakay amin'ny fitaovantsika, tsy maintsy manindry sy mitazona ny bokotra Option amin'ny fitaovantsika isika rehefa misafidy indray. Avy eo, mifidy ny fisie iOS 13 izay efa nakarinay teo aloha izahay ary miandry ny fotoana hisian'ny fanavaozana.
Apetraho amin'ny Windows ny iOS 13 beta
Ny dingana hametrahana ny iOS 13 beta amin'ny Windows dia mitaky andian-dingana fa tsy sarotra, izay tsy maintsy arahantsika mba hametrahana azy amin'ny fitaovantsika.
Raha vantany vao nisintona ny IPSW mifandraika amin'ny terminal izahay dia tsy maintsy ampidino ny rindrambaiko DeviceRestore, izay azontsika jerena ao amin'ny tahiry GitHub. Isika dia tsy maintsy ampidino ity rindranasa ity amin'ny lahatahiry izay nitahirizanay ihany ny IPSW an'ny terminal misy anay izay nalainay teo aloha.
Manaraka izany, mankany amin'ny bara fitadiavana Windows izahay ary manoratra CMD hiditra amin'ny tsipika baikon'ny Windows. dia mankany amin'ny lahatahiry izahay izay misy ny IPSW sy ny application DeviceRestore.
Raha ao amin'ny reperitoara iOS-13 izany dia soratantsika ny tsipika komandy «cd iOS-13».
Avy eo, ao anatin'ny tsipika komandin'ny lahatahiry misy ireo rakitra roa ireo dia hanoratra izahay: "idevicerestore -d version-name.IPSW" tsy misy teny nalaina. Amin'ity tranga ity dia ho "idevicerestore -d iPhone_4.7_13.0_17A5492t_restore.IPSW"
Tsara ve ny mametraka ny beta an'ny iOS 13?
Tsia, tsy misy toa ny kinova beta amin'ny rindranasa na rafitra fandidiana, tsy tokony hatao mihitsy ny mametraka azy io amin'ny fitaovantsika raha mbola tsy ilay fitaovana ampiasainay ho fitaovana lehibe, indrindra raha ampiasaintsika hiasa izy io, satria ny fahombiazany sy ny fanjifana ny bateria dia mety mamela zavatra betsaka irina.
Soa ihany, tao anatin'izay roa taona lasa izay, Apple dia nanatsara ny fiasan'ny betas izay nandefasany ny rafitra fiasan'izy rehetra mihoatra lavitra noho ny tsara ny zava-bitany raha ampitahaina tamin'ny taona lasa. Natao ho an'ny mpandrindra ny betas mba hampifanaraka ny fampiharana azy ireo amin'ireo endrika vaovao nampiharina hiteraka olana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fahombiazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fametrahana iOS 13 beta amin'ny iPhone sy iPad amin'ny Windows sy Mac
Google dia manambara ny pitsopitsony ofisialy rehetra momba an'i Stadia
Ny Realme 3 Pro dia efa amidy any Espana manomboka amin'ny € 199